FAQs - Ningbo Yobo SCM Co., Ltd
No Hataoko mahazo santionany?
Fa ny voninahitra mba hanolotra anareo santionany. Tsindrio eto, dia hanana fahafahana hahazo maimaim-poana santionany.
Ahoana no hanao ny orinasa momba ny fanaraha-maso ny kalitao?
Quality no loha laharana. Foana izahay hametahana manan-danja lehibe ny kalitao controling avy manta ny entana ara-nofo. Manana fomba feno sy fanatsarana ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao, anisan'izany IQC (Narahi-kalitao fanaraha-maso), PPI (Preproduction Jereo Ion), DPI (nandritra ny famokarana maso) sy FQA (farany kalitao fanomezan-toky).
No mandoko fahasamihafana misy eo amin'ny santionany sy ny famokarana?
Eny, loko hafa dia tena ara-dalàna samy hafa, na ara-nofo jazakely ny antontan-fanontam-pirinty Logo na vy Logo, noho ny toetrandro, ny hafanana sy handokoana ny lamba sns, fa aoka ihany hisy hamantatra ny tsara indrindra mba hisorohana ny lehibe samy hafa loko.
Azonao handamina ny entana?
Amin'ny ankapobeny ny fitaovana orinasa miara-miasa izahay dia afaka mandefa ny entana ho any amin'ny toerana tianao. Ankoatra izany, dia mampanantena fa ny entana ho nanao fandaharana raha vao aspossible dia nanolotra ao amin'ny fotoana fohy indrindra.